Ny fiantraikan'ny rano amin'ny fitomboan'ny zava-maniry: 1. Ny rano dia ampahany amin'ny zavamaniry; 2. Fahaizana mitazona ny fiorenan'ny zavamaniry: ny rano dia mandray anjara amin'ny fotosintèntis, ny respiration, ny synthes ary ny decomposition ny zavatra biolojika; 3. Ny rano no solvent ho an'ny zava-maniry ...
Safidio ny rafitra fanondrahana Micro, vonjeo ny rano mitete rehetra!
Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity dia firenena maro manondrana vokatra manerantany manerantany no iharan'ny haintany, izay nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny toekarena manerantany. Ohatra, i Etazonia sy i Brezila dia main-tany main-tany. Vary, katsaka ...
Ny fanondrahana Sprinkler, izany hoe ny famafazana rano, dia fomba fanondrahana mandroso izay mampiasa andiana fitaovana manokana hanaparitahana rano anaty tsindry mankany amin'ny rivotra, mamorona vongan-drano kely, toy ny orana, aondraka mitovy amin'ny tany nambolena ...
1.Raha ampiasaina amin'ny sarimihetsika fambolena ny fantsom-drano mitete, noho ny tara-masoandro, dia etona ny rano ambonin'ny tany, ary hidina ao anaty vongan-drano kely amin'ny sarimihetsika fambolena. Ireo vongan-drano kely ireo dia hamorona solomaso. Eo ambanin'ny lavitra sy sunlig mety ...